Enweghị m ike bulite foto na Instagram: ọ na -aga n'ihu na -ebu, gịnị ka m ga -eme? | Nzukọ mkpanaka
Ignacio Sala | 15/09/2021 12:00 | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Soshal midia, maka nke ọma ma ọ bụ nke ka njọ, aghọọla ọnụ na -ekwuchitere ọtụtụ nde mmadụ na, ma ọ bụghị, ha agaghị enwe ụzọ esi egosipụta onwe ha. Hapụ ojiji ụfọdụ ndị ọrụ na -eme iji mepụta esemokwu iji dọta mmasị ndị ọrụ ndị ọzọ, mgbe ọ naghị arụ ọrụ nke ọma ọtụtụ na -atụ ụjọ.
Instagram, dị ka usoro ịntanetị ọ bụla ọzọ, ịchọrọ njikọ ịntanetị, ebe ọ bụ na anaghị echekwa ọdịnaya n'ime mpaghara na ngwaọrụ ahụ. Agbanyeghị, ọ nwere ike ọgaghị arụ ọrụ dịka o kwesịrị. Kedu ihe na -eme mgbe enweghị m ike bulite foto na Instagram?
Ngwọta maka nsogbu enweghị m ike bulite foto na Instagram dabere n'ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka esi edozi nsogbu a, a na m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na -agụ akwụkwọ.
1 Instagram dị ala
2 Anyị enweghị njikọ Ịntanetị
3 Njikọ Ịntanetị adịghị mma
4 Mechie ma mepee ngwa ahụ
5 Melite ngwa na ụdị nke ọhụrụ
6 Kachapụ oghere
7 Jiri ụdị ntanetị
8 Malitegharịa ngwaọrụ
Instagram dị ala
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime mgbe anyị enweghị ike ibipụta foto na Instagram bụ ịlele ma Instagram dị ala. Kachasị usoro iji lelee ma ọ bụrụ na sava Instagram agbadala ọ bụ site na weebụ Down Detector.
Site na ibe a, anyị nwere ike ịma ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị ọrụ kọrọ n'ime awa 24 gara aga. Site na eserese ọ na -egosi anyị, anyị nwere ike ịmata ngwa ngwa ma ọ bụrụ na sava nke ikpo okwu agbadala.
Ọ bụrụ na eserese na -egosi ọtụtụ ihe mere n'oge ahụ, naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ichere ka edozi nsogbu ndị ahụ. Na nke ikpo okwu a anaghị arụ ọrụ na -enweghị njikọ ịntanetịAnyị enweghị ike bulite ọdịnaya ma ọ bụ lelee ihe ọhụrụ.
Anyị enweghị njikọ Ịntanetị
Ọ bụrụ na anyị achọpụtala na sava ahụ abụghị nsogbu, anyị ga -enyocha ma nsogbu a dị na ngwaọrụ anyị. Ihe mbụ anyị kwesịrị chọpụta ma anyị nwere njikọ ịntanetị, ma ọ bụ site na Wi-Fi ma ọ bụ iji data mkpanaka.
A na-egosi njikọ Wi-Fi site na triangle atụgharịrị n'elu ihuenyo. Ọ bụrụ na nke a apụtaghị na ọ pụtara na anyị ejikọghị na netwọk Wi-Fi, yabụ ọ bụrụ na anyị enweghị data mkpanaka, anyị agaghị enwe ike bulite foto n'elu ikpo okwu.
Iji chọpụta ma ọ bụrụ na anyị nwere data mkpanaka (ọ bụrụhaala na anyị agwụbeghị ọnụego anyị), anyị ga -enyocha ma egosiri okwu 3G, 4G ma ọ bụ 5G n'akụkụ ọkwa mkpuchi. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ikpe, anyị enweghị ịntanetịNke ahụ bụ, anyị enweghị data mkpanaka, yabụ na anyị enweghị ike bulite foto na ịntanetị.
Njikọ Ịntanetị adịghị mma
Ọ bụrụ na onyonyo na -ewe ogologo oge bulite ma ọ bụ ngwa weghachite njehie na -ebufe, ọ bụrụ na anyị nwere njikọ ịntanetị, ọ nwere ike bụrụ mgbama nke rutere na ngwaọrụ mkpanaka anyị esighi ike na ọsọ dị oke ala.
Iji chọpụta ma ọ bụrụ na ọkwa mgbaàmà Wi-Fi na data mkpanaka na-erute na ngwaọrụ anyị adịghị ike, anyị ga-elele ọnụọgụ mmanya nke mgbaàmà Wi-Fi na ọnụọgụ nke mkpuchi mkpuchi mkpanaka. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ogwe bụ 1 ma ọ bụ 2, anyị nwere ike idozi nsogbu a site na ịgagharị ntakịrị.
Ekwesịrị icheta na mgbidi na / ma ọ bụ mgbidi na mgbakwunye na ngwa eletriki ha anaghị adị na akara ikuku, yabụ site n'ịgbanwe ọnọdụ, anyị ga -edozi nsogbu ahụ ngwa ngwa.
Mechie ma mepee ngwa ahụ
Ngwaọrụ mkpanaka na -ahụ maka ijikwa ngwa mepere emepe dabere na ole ebe nchekwa dị na ngwaọrụ ahụ. Ka ị na -enwekwu RAM, ngwa ndị ọzọ ka ghe oghe na ndabere (nke na -abụghị otu ihe ahụ na -agba n'okirikiri).
Ọ bụrụ na ị na -eji Instagram oge niile, o yikarịrị ka ngwa ahụ agaghị emechi kpamkpam, yabụ ọ bụrụ na ọ nwere nsogbu ọrụ, ọ naghị emelite ndepụta ahụ ma ọ bụ ọ naghị ekwe ka anyị bulite onyogho ma ọ bụ ọ ga -ewe ndụ anyị niile iji bulite ha. ikpo okwu, anyị kwesịrị imechi ngwa ahụ wee mepee ya ọzọ.
Melite ngwa na ụdị nke ọhụrụ
Agbanyeghị na ọ bụghị ihe ọhụrụ, mgbe ụfọdụ, Instagram na -ewepụta mmelite ọhụrụ, mmelite dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ ga -enwe ike ịnweta ikpo okwu, na -enwe ike amachi ojiji nke ngwa ahụ na mmelite ọhụrụ.
Iji lelee ma anyị nwere ụdị ọhụụ, ụzọ kachasị ọsọ bụ ịbanye na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ App Store wee chọọ Instagram. Ọ bụrụ na ewepụtara mmelite ọhụrụ, kama igosi bọtịnụ Mepere emepe, a ga -egosipụta mmelite.
Etu esi ebudata foto Instagram na PC ma ọ bụ ekwentị gị
The cache bụ ihe ọzọ na -agụnye na malfunction nke ngwa mkpanaaka. Ngwa ngwa bụ data ngwa echekwara na ngwaọrụ ka ọ na -ebugo onyogho na ederede a na -emekarị ngwa ngwa.
N'ụzọ dị otu a, ọ bụghị naanị belata ngwa ịntanetị, kamakwa, itinye nri na -ejedebe naanị na data ọhụrụ, ọ bụghị na data niile dị n'elu ikpo okwu.
Ọ bụrụ na ngwa ahụ nwere nsogbu mgbe ị na -ebugo onyonyo, ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ihe ngwọta anyị tụpụtara n'elu arụbeghị, anyị ga -etufu oghere wee nwaa ọzọ.
Ọ bụ ezie na iOS na -ahụ maka ịkwapụ oghere n'oge na -adịghị anya (na -egbochi onye ọrụ ihichapụ ya) na gam akporo anyị nwere ike jiri aka gị rụọ usoro a. Iji kpochapụ oghere dị na gam akporo, anyị ga -enwerịrị njirimara nke ngwa wee pịa bọtịnụ Kachapụ oghere.
Jiri ụdị ntanetị
Ọ bụrụ na mgbe anyị nwalechara ụzọ ndị a dị n'elu, ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ, anyị nwere ike nwalee site na ụdị weebụ site na ihe nchọgharị anyị. Agbanyeghị na webụsaịtị na -akpọ anyị oku ka anyị mepee ngwa etinyere, anyị ga -emerịrị usoro iji bulite foto site na ụdị weebụ, ụdị weebụ nke na -enye anyị otu arụmọrụ dị ka ngwa mkpanaka.
Na kọmpụta, ebe ngwaọrụ mkpanaka na -abatakwa, ihe ngwọta dị mfe mgbe ụfọdụ bụ reboot ngwaọrụ, nzuzu dị ka ọ nwere ike iyi. Mgbe ị malitegharịrị ngwaọrụ ahụ, sistemụ arụmọrụ na -amalitegharị site na ọkọ na itinye ihe ọ bụla n'ọnọdụ nke ya.
Ọ bụ ezie na sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka ka emebere ka nọrọ n'ọrụ ruo ọtụtụ izu na -enweghị mkpa nrụgharị, ọ naghị afụ ụfụ ịmalitegharị ya oge niile, ọkachasị mgbe arụmọrụ bidoro mebie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Enweghị m ike bulite foto na Instagram: ọ na -aga n'ihu na -ebu, gịnị ka m ga -eme?
Otu esi arụ ọrụ NFC na iPhone na ụdị dakọtara